I-Vee24: Ukuzibandakanya Kwevidiyo Ebukhoma Kukhulisa Ukuguqulwa ngama-38% | Martech Zone
I-Vee24: Ukuzibandakanya Kwevidiyo Ebukhoma Kukhulisa Ukuguqulwa ngama-38%
NgoMgqibelo, Juni 18, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kuleli sonto, ngibe nokuhlangenwe nakho okumangalisa kakhulu Vee24Isixazululo sevidiyo esiku-inthanethi sewebhu. Le nkampani sekuneminyaka embalwa yenze ngcono inhlanganisela yesoftware nesoftware njengesixazululo senkonzo esithengeka ngendlela emangalisayo.
Ini Vee24 okufezile akukho okumangazayo. Lapho iklayenti likusayinisa, baqale bathenge i-hardware, efaka umbhoshongo onekhamera yevidiyo, ukukhanya kwangaphambili, i-monitor yokusakaza kanye nokukhanya okusemoyeni. Ikhompyutha yisiqaphi sesikrini sokuthinta esingu-24 running esisebenzisa iWindows 7 nohlelo lweVee24.
Isoftware ayivele ivuleke bese iqala ividiyo. Kuqhamuka i-div enhle ikunikeza ukuthi uxoxe nomuntu ngakolunye uhlangothi. Ugaxekile ungaqalwa ngummeleli, uqalwe ngokuzenzakalela, noma umsebenzisi angachofoza ithebhu enhle ohlangothini lwesikrini ukuze ayiqalise.
Uma umsebenzisi amukela isimemo, isoftware ikuxhuma nommeleli. Ngokufana nokuvulwa kwengxoxo yevidiyo (ungavula nekhamera yakho futhi, omele imininingwane angabona yonke imininingwane yesiphequluli sakho (Isistimu Yokusebenza, Isiphequluli, njll.) Kanye nekhasi elinobukhulu obufanayo. Bangakwazi futhi ukukhipha iwindi labo wendlela yokukunikeza indawo enkulu kakhulu.
Mhlawumbe isici esimangalisa kakhulu ukuthi iVee24 nayo inesici sokwabelana - ivumela imibhalo, amapowerpoints noma elinye ifayela ukuthi livulwe futhi labelwe. Ungahlanganyeli nje kuphela ngalo… ungasebenzisana ngqo nommeleli. Isikhulu esiphezulu u-Andy Henshaw ungihambile ngayalela ukuvakasha kwenye indawo ... lokho okuhlangenwe nakho bekumangalisa, bekungeke kube lula. Sobabili sikwazi ukwenza ushintsho kwifomu ekhasini elifanayo, ngasikhathi sinye futhi salithumela!
Imiphumela yamakhasimende kaVee24 ibivele imangalisa… izinkampani ezifana neFord, Lexus, Lands 'End, Mini Couper, Heels.com kanye nezinye izinkampani ezingamakhulu zibona Ukuphakama okungu-38% ngamanani okuguqulwa. Impendulo yekhasimende yohlelo nayo icishiwe emashadini.
Nasi isibonakaliso sevidiyo seVee24 ku-Internet World:
Ngenkathi imiphumela eminingi esheshayo ibonakala ngokuthengisa, angicabangi ukuthi ukutshalwa kwemali kusoftware enjengalena kungayenzelani ukugcinwa kwamakhasimende eSoftware njengezinkampani Zesevisi. Ukukwazi ukubonana futhi babelane ngesikrini kuzokwenza ukuthi ukusebenzelana kwamakhasimende kube lula esikhundleni samaphupho amabi manje! Kubonakala sengathi iVee24 ayisiye nje umholi kule mboni, ukuphela kwenkampani enikezela ngale nsizakalo njengamanje. Akungabazeki ukuthi bazophumelela kakhulu! Sesibashayele ukuhlanganyela kokudluliselwa.
Ngakho-ke ungakhohlwa ukubazisa ukuthi uthole mayelana nensizakalo ngokusebenzisa Martech Zone!
Tags: I-Gmail (i-Android)Imeyili ye-Yahoo (Ideskithophu)
Isikhathi Sokuxhumana Komphakathi
Phendula ku-Twitter futhi bazothenga
Jun 20, 2011 ku-1: 44 PM
Ku-vee24: Ayikwazanga ukuvuma okuningi. Sisebenzisa i-vee24 suite yamakhasimende ambalwa emakethe yaseJalimane futhi iyamangalisa. Kepha okubaluleke njengobuchwepheshe: kusiza amaklayenti ethu ukushayela ibhizinisi. Ngokubona kwami ​​le ngenye yezindlela eziphumelela kakhulu zokukhiqiza ukuhola kanye nokuthengisa okungeziwe ngaphezu kwe-inthanethi!